के हो महामूर्ख सम्मेलन ? महामूर्खको छनौट कसरी हुन्छ ? – खोज केन्द्र
» प्रदेश » ब्लग » विचित्र » शिक्षा/कला » समाचार » समाज अंक: 2559
के हो महामूर्ख सम्मेलन ? महामूर्खको छनौट कसरी हुन्छ ?
खोज केन्द्र बिहिबार, फाल्गुण २२, २०७६ मा प्रकाशित
महामूर्ख सम्मेलन नेपालको विभिन्न स्थानमा हुने गरेको छ । जनकपुरधाममा यो सम्मेलनले निकै उचाई प्राप्त गरेको छ । तर यसको प्रारम्भ नेपालको विरगंजबाट भएको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् । मैथिली साहित्य परिषद विरगंज २०५० सालमा यसप्रकारको पहिलो आयोजना गरेका थिए । पहिला महामूर्ख लाला माधवेन्द्र जी भएका थिए । यो सम्मेलनको परिकल्पनाकार मध्येका एक मैथिली साहित्य परिषदक पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र किशोर झा भन्छन्, ‘नेपालमा २०४६ सालमा बहुदल आएको थियो । राजनीतिक रुपले बदलाबको समय थियो । त्यही बदलाबको बेला समाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्रका व्यक्तिको पनि योगदानको आवश्यकता रहेको थियो त्यहीबेला यसप्रकारको कन्सेप्ट आएको होे ।’ समाजमा रहेको विकृति विसंगतिलाई समाप्त पार्र्न ब्यंग्यले धेरै कार्य गर्ने गरेको उनको कथन रहेको छ ।
जनकपुरधाममा २०६१ सालबाट महामूर्ख सम्मेलन हुँदै आएको छ । २०६१ सालमा महामूर्खको उपाधी मैथिली कवि नरेश ठाकुर, २०६२मा एमाले नेता शीतल झा, २०६३मा जनकपुरधाम नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हरिबहादुर बिसी, २०६४मा सदभावना नेता ओमकुमार झा, २०६५मा बरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल, २०६६मा पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झा, २०६७मा नेपालका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, २०६८मा साहित्यकार रामभरोष कापडि़ भ्रमर, २०६९मा सांसद रामसरोज यादव, २०७०मा राजपाका नेता एवं पूर्व सांसद डा. विजयकुमार सिंह, २०७१ मा नेकपा नेता एवं सांसद शत्रुधन महतो र २०७२ मा श्मसान घाटलाई स्वर्गद्वारा बनाएर चर्चा कमाउनु भएका पवन सिंघानियालाई महामुर्खको उपाधी प्रदान गरिएको थियो ।
महामूर्खक छनौट कसरी हुन्छ धेरैको उत्सुकताको विषय हुनसक्छ । सहीमा कम मेहनतको कुरो होइन धेरै दिमाग खियाउनु पर्छ आयोजकहरु बताउँछन् । महामूर्ख सम्मेलनको आयोजक मिथिला नाट्यकला परिषदका पूर्व अध्यक्ष मदन ठाकुर भन्छन्, ‘महामूर्खको छनौटका लागि तैयारी आयोजनासँग खोजी शुरु भइहाल्छ । यसका लागि एकटा कमिटी गठन गरिन्छ । त्यसैले निर्णय गर्दै आएको छ । केही व्यक्ति महामूर्ख बन्नका लागि कसेर लागेको हुन्छ ।’
जनकपुरधामको स्थानीय पत्रिकाहरु एक हप्ता पहिलादेखि नै को महामूर्ख बन्ने त्यसको नाउँमा चर्चा चलाएको हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिल मिश्र भन्छन्, ‘महामूर्ख जनकपुरधामको एकटा लोकप्रिय कार्यक्रम रहेको छ त्यसलाई मिडिया क्यास नगर्ने कुरै आउँदैन । फेरी मिडियामा चर्चा भएपछि कार्यक्रको आकर्षण बढने गरेको छ । समान्यतया धेरैलाई लाग्नसक्छ महामूर्ख को बन्छ ? तर आश्चर्यको कुरो यो रहेको छ धेरै कामना गरिरहन्छ यसपाली म महामूर्ख बनु ।’
२०६५ सालका महामूर्खक उपाधि प्राप्तकर्ता एवं मैथिलीक बरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र प्रसाद विमल भन्छन्, ‘उपाधि प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि रहेको छ, प्रेमले मानिस हरेकथोक अर्थात विषपनि पिउने गरेको इतिहास रहेको छ । यस्तोमा महामूर्ख पाउनु ठूलो कुरो हो । २०७५ सालका महामूर्ख लालकिशोर साहले महामूर्खको उपाधि प्राप्त गर्नुलाई उपलब्धिको रुपमा पाएको बताउनु भयो ।